Xulka qaranka Brazil oo iska xaadiriyey finalka Copa America 2019, kaddib markii ay garaaceen Argantina…. + SAWIRRO – Gool FM
Xulka qaranka Brazil oo iska xaadiriyey finalka Copa America 2019, kaddib markii ay garaaceen Argantina…. + SAWIRRO
(Brazil) 03 Luulyo 2019. Xulka qaranka Brazil ayaa iska xaadiriyey finalka tartanka Copa America 2019, kaddib markii ay 2-0 ku garaaceen dhigooda Argantina.
Qeybta hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaaminayeen wiilasha martigaliyaasha tartankan ee Brazil.
Daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta Gabriel Jesus ayaa hogaanka u dhiibay xulka qaranka Brazil, wuxuuna ka dhigay 1-0, kaddib caawin uu ka helay xiddiga kooxda Liverpool ee Roberto Firmino.
Qeybtii labaad ee ciyaarta marka dib leysugu soo laabtay waxay labada dhinac soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxayna sidoo kale sameeyeen fursado halis ah ee loo filan karay goolal, inkastoo fursadaha ugu badan ay sameeyeen wiilasha xulka qaranka Brazil.
Waxay ciyaarta socotaba isla markaana ay ahayd weerar iyo weerar celis, Roberto Firmino ayaa niyadjabiyay taageerayaasha xulka qaranka Argantina, wuxuuna dheesha ka dhigay 2-0, iyadoo uu goolkan si qurux badan uu kaga caawiyay xiddiga Man City ee Gabriel Jesus, kaasoo inta uu ku soo baashaalay daafacyada Argantina meel cidla ah u soo dhigay.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-0, Xulka qaranka Brazil ayaana sidaas isaga xaadiriyay finalka Copa America 2019, oo sanadkan ay iyagu martigalinayaan.
Xulka qaranka Brazil ayaa wuxuu kulanka kama dambeysta ah ee tartankan kul ciyaari doonaa xulkii soo adkaada Chile iyo Peru oo caawa wada ciyaaraya.
RASMI: Isku aadka wareega 16-ka ee koobka qarammada qaaradda Afrika 2019 oo la sameeyay